Ny fako plastika dia ahafahana manamboatra biodiesel | Fanavaozana maintso
Ny fako plastika dia ahafahana manamboatra biodiesel
Adriana | | Biodiesel, fanodinana
El plastika Izy io dia iray amin'ireo fitaovana be indrindra ary miaraka amin'izay koa no mandoto indrindra satria misy be dia be ny zavatra, kaontenera ary singa izay amboarina miaraka aminy.
Ny ankamaroan'ny plastika dia miafara amin'ny fako ary tsy voaverina izay hadisoana lehibe satria azo atao ny mampiasa indray ny plastika hamokarana lasantsy mora vidy ary ambonin'izay rehetra madio kokoa. Tombanana ho isaky ny taonina ny fako plastika hanamboarana gazoala manodidina ny 760 litatra.
Dingana iray antsoina hoe pyrolysis no ampiasain'ny ankamaroan'ny karazana plastika azo haverina.
Ny fizotran'ny pyrolysis dia misy ny fanasokajiana ny plastika, mametraka azy ireo ao anaty kaontenera amin'ny sombin-javatra kely ary ao anaty lafaoro misy hafanana ambony hafanana ary mandoro azy ao anaty banga. Avy eo ity dia mamorona entona mandehandeha amin'ny endrika ranoka, voasivana ary manala ireo singa mandoto azy.
Misy orinasa maromaro izay manao an'io karazana vokatra io na any Eropa na any Etazonia.
Anisan'izany i Cynar miavaka, ny asa any Irlandy izay afaka manamboatra plastika 665 litatra miaraka amina plastika iray taonina. Diesel, 190 litatra ny lasantsy ary 95 ho an'ny solitany.
Manitatra ny fiankinan-doha amin'ny fanitarana ny fanamboarana an'io solika simika io nefa mitovy fahombiazana ihany koa menaka, izay olana lehibe amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Hatreto dia tsy misy afa-tsy fomba iray misy ireo karazany sasany hanovana ny plastika ho lasa solika.
Mandeha tsikelikely, ny filokana amin'ny fampiasana plastika hanaovana solika, izay miara-mamaha olana roa, amin'ny lafiny iray, ny fako plastika ary, ny iray hafa, ny tsy fahampian'ny solika sy lasantsy fosily.
Amin'ny taona ho avy, ity karazana indostria ity dia azo antoka fa hampivelatra bebe kokoa eran'izao tontolo izao.
Ny plastika dia fitaovana mandoto be izay miteraka fahasimbana lehibe amin'ny tontolo iainana, noho izany dia tokony hiezaka ny hampihena ny fampiasana azy ianao ary hampiasa ny biodegradable.
LOHA HEVITRA: Avereno fanodinana aho
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » Biodiesel » Ny fako plastika dia ahafahana manamboatra biodiesel
Fomba fanaovana solika amin'ny fako plastika
Jimmy Antezana G. dia hoy izy:
Aiza no ahazoako milina manana 250 kgr / ora, izay mamokatra gazoala, lasantsy ary solitany?
Valiny tamin'i Jimmy Antezana G.
Amboary ny diapera ary mamokatra biogas
Kaopy azo hanina sy azo ovaina